Ny iPad Mini 4 dia manana efijery tsara kokoa noho ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Toa na dia nohavaozina herintaona taty aoriana noho ny tokony ho izy aza ary kely dia kely ny fanovana ka tsy mendrika akory ny hanana fotoana kely eo amin'ny Keynote farany nataon'i Apple, ny iPad Mini 4 dia mbola velona sy miaina tsara. Izy dia mikapoka ireo zokiny lahy amin'ny lafiny iray lehibe: ny efijery. Farafaharatsiny izany no manome toky azy ireo ao amin'ny DisplayMate, izay manamafy amin'ny tatitra farany izay nampitahan'izy ireo ny efijery tamin'ny iPad Mini 4 natomboka tamin'ity taona 2015 ity sy ny an'ny iPad Air 2 an'ny 2014 ary ny iPad Pro ankehitriny ary nandresy tamin'ny lavitra, mahatratra milaza izany "IPad Mini 4 dia manana ny efijery LCD tsara indrindra takatry ny takelaka".
Ny iPad Mini 4 noho izany dia nahazo ny mari-pankasitrahana "ny efijery LCD tsara indrindra sy marina indrindra izay nosedraina tamina takelaka iray." Ny iPad Pro koa dia nisy fanamarihana tsara tao amin'ny tatitra nataony, ary ny efijery dia nahazo isa tamin'ny fizarana samihafa tamin'ny andrana niaraka tamin'ny naoty hatramin'ny "Tena tsara" ka hatramin'ny "Tsara". Ny fijanonana ratsy indrindra dia ny efijery an'ny iPad Air 2, izay tsy hoe nisy vokany ratsy, fa nihemotra tao ambadiky an'ireo takelaka Apple hafa izy, zavatra iray izay tsy mahagaga satria ilay fitaovana no lava indrindra raha tsy misy manavao rehefa navoaka tamin'ny 2014.
Ny iray amin'ireo lafiny niavaka indrindra tamin'ny iPad Mini 4 dia ny loko miloko amin'ny efijery ary ny takelaka lehibe kokoa, iPad Pro sy Air 2 dia mijaly amin'ny loko manga matevina. Ireo takelaka telo dia misongadina amin'ny fahitan'ny efijery amin'ny tontolo mamirapiratra, izay iantohan'ny DisplayMate fa tsy manan-tsahala izy ireo amin'ny sokajy takelaka. Ny iPad Pro dia mivoaka tsara amin'ny resaka "Contrast Ratio", izany hoe ny fahasamihafana misy amin'ny fotsy fotsy indrindra sy ny mainty mainty, lafiny iray izay nandresen'ny iPad Pro tamin'ny fihotsahan'ny tany nisy isa 1,631 tsy tratran'ny takelaka misy LCD écran.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny iPad Mini 4 dia manana efijery tsara kokoa noho ny iPad Pro
Satria ny fanovana ny iPad Mini 4 dia tena kely tokoa i Luis? Tsy miresaka momba ny iPad Mini 3 ianao ??? Satria raha ny marina ny hany fanovana natrehin'ny iPad Mini 3 mikasika ny iPad Mini 2 dia ny fampidirana ny Touch iD, tsy misy hafa. Ny sisa tamin'ireo singa (micro, RAM, sns, sns) dia nitovy tanteraka.
Ao amin'ny iPad Mini 4 ny processeur, coprocessor, RAM, fakan-tsary lehibe izay manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 8 Mpx, ny chip Wifi, ny puce Bluetooth, ny fampidirana barometre, ary ambonin'izany rehetra izany ary ambonin'izany rehetra izany, ary araka ny voalazanao tsara ao amin'ny fidirana, ny efijery izay ny efijery tsara indrindra ananan'ny takelaka an-tsena. Raha fiovana kely dia kely ireo dia ho avy Andriamanitra hahita an'i Luis.
Raha tsy te "hanao doka" be loatra ny takelaka Mini-ny i Apple, izy ireo sy izy ireo ihany no hahafantatra ny antony, saingy mazava ho azy fa ny iray amin'izy ireo dia tsy hoe niova fanovana vitsivitsy satria ny mifanohitra amin'izany no izy. Ambonin'ny zava-drehetra, ary araka ny nolazaiko, raha ampitahaintsika ireo fanovana ireo tamin'ny iPad Mini 3 nampitahainy tamin'ny iPad Mini 2, izay araka ny nolazaiko fa iray ihany, ny fampidirana ny Touch iD ary nanontaniany tamin'izay € 100 fanampiny. Vazivazy vitsivitsy izay azoko tsara ny fomba nitondran'ny tsena azy. Ankoatr'izay, ny tranokala rehetra dia nanoro ny fividianana iPad 2 mihoatra ny 3 satria ny fahasamihafana € 100 ho an'ny Touch iD dia tsy mendrika satria ny ambiny dia mitovy tanteraka.
Ny tenako dia nividy iPad Mini 4 Wifi 64Gb (nanapa-kevitra tsara aho taorian'ny nahalalako tsara ny vaovao tao anatiny) ary mila milaza aho fa faly.
Cobe The Gallery, lalao piozila miala sasatra amin'ny cubes sy loko